UNGAKUPHILISA NJANI UKWENZAKALA KWAKHO NGOKUKHAWULEZA OKUKHULU - IIMPAWU ZEMPILO EZINGAQHELEKANGA
Imifanekiso ebonakalayo / imifanekiso engenanto
Ukuba uhlangabezana nokugruzuka rhoqo, nantsi into ekubekek 'ityala ngayo ngamabala akho amnyama- kunye namaqhinga avunyiweyo ogqirha okukhawulezisa inkqubo yokuphilisa.
Iti yomqala obuhlungu kunye nokukhohlela
Kutheni le nto ukuBruja kwenzeka
IiCapillaries yimithambo yegazi emincinci ehambisa izondlo phakathi kwegazi kunye nezicubu ezikufutshane- kwaye naluphi na utshintsho olunokukhokelela kwinto yokugruzuka. 'Unee-capillaries ezincinci ezifakwe kuphela ziithishu [collagen] kunye nolusu, utshilo uRachel Nazarian, MD, ugqirha wesikhumba e Isikhumba seSchweiger kwisiXeko saseNew York. 'Nantoni na ebangela ukuba ulusu lunciphe, i-collagen yehle, okanye ezona ndonga ze-capillaries zibuthathaka [kwaye ziqhekeze], izakonyusa amathuba okuba ube nokugruzuka.'
Ezinye iindawo-njengee-shins-zinomqamelo omncinci, obenza ukuba bathambekele ekugruzukeni. Omnye umgwebi? Ukunqongophala kweVitamin. Ezona vithamini ziphambili kufuneka uzithintele zi-vitamin C ne-K, utshilo umNazari. 'Ukuba uneevithamini ezisweleyo, une-clotting engaqhelekanga,' utshilo.
Kwaye ngelishwa, abanye abantu basengozini yokugruzuka kunabanye. 'Xa ulusu lukhanya ngakumbi [a.k.a. uphaphathekile], igazi elingaphantsi liya kucaca gca, 'utshilo umNazari. Ke ngelixa usenokungatyumzi ngaphezulu, amanqaku ayabonakala.
Ungaphilisa njani ngokukhawuleza
Ukuba ukutyumka kwakho kuyatshintsha umbala, ngumqondiso olungileyo lowo. Oko kuqala njengombala ubomvu-mfusa ekugqibeleni kuya kuguquka kube luhlaza-butyheli, kuze emva koko kube mdaka ngegolide phambi kokuba umvalo unyamalale. Kodwa siyazi ukuba inokuziva ngathi ithatha unaphakade. Ngethamsanqa, kukho amanyathelo ambalwa onokuwathatha ukukhawulezisa izinto kunye.
Dermend Ukuthomalalisa iBruise Formula Cream ($ 30, cvs.com Unyango olunye olunokusetyenziswa mihla le ukuba uqhele ukutyumka. Ungayisebenzisa kwakhona xa unemivumbo kuba ifakwe i-arneca, intyatyambo eyonyusa ukujikeleza kwegazi kwaye inyange ukuvuvukala, utshilo umNazari.
Ukuba u-vitamin-deficient, ukungenisa iivithamini C kunye no-K, nokuba kukutya kwakho okanye ngokusebenzisa izongezo, kuya kunceda ukukhusela ukutyumka rhoqo, ngelixa ukusetyenziswa kwezihloko kuya kunceda ukuphilisa umvalo ngokukhawuleza. Zama ukusebenzisa i-VI Derm Vitamin C Topical Serum ($ 80, vipeel.com ) okanye iiLebhu zeLebhu zeVitamin K Cream ($ 19, gnc.com kwiindawo apho uhlala uzifumana khona ukuze ukwazi ukuqala ukuzinyanga ngaphambi kokuba zivele.
Ngokungaqhelekanga ngokwaneleyo, ukutya iipinapple ezininzi kunokwenza okulungileyo, nako. Isiqhamo sine-enzyme ebizwa ngokuba yi-bromelain, enceda ukunciphisa ukudumba, utshilo umNazari.
izihlangu ezilungileyo zomsebenzi ngeenyawo zakho
I-Nazarian ikwacebisa ukucoca ukutyumka ngaphakathi kweeyure ezingama-24 ukunciphisa ukudumba kunye nentlungu enokubakho, ukongeza ekusebenziseni ibhandeji yelastiki. 'Ukusebenzisa i-bandage kunokunceda ukucotha ukuhamba kwegazi ukulawula ngcono ukopha, utshilo. 'Ingabunciphisa ubukhulu bemivumbo.'
Inani leengelosi ezingama-444
Ngelixa ulinde loo nto ukuba iphele tu, ungasebenzisa ukufihla ukufihla imivumbo. 'Ukuya [kuhlobo] lwam Gquma iFX , utshilo umNazari. '[Iimveliso zabo] badla ngokuba nesigqubuthelo esingacacanga esinemibala eyahlukeneyo yesikhumba kwaye banikezela ngesigqubuthelo esikhulu xa isiseko sokwenza izinto singasigubungeli.' Yenza lula imveliso ngaphezulu kokutyumka, kwaye udibanise neminwe yakho.
Kwaye ekubeni ukugruzuka kungabonakali kakhulu kwiithoni zesikhumba esimnyama, tshintsha into yokuthambisa umzimba ukuze uthambise yonke imihla. IJergens yendalo yokuKhanya kweMihla ngemihla ($ 6.79, jergens.com ) kunye ne-NKD SKN yokuKhanya ngokuKhanyayo mihla le kwiTan Moisturizer ($ 15, ulta.com ukubonelela yonke imihla yokuhambisa amanzi kunye nombala okhuselekileyo.
Inqaku Ungakuphilisa njani ukwenzakala kwakho ngokukhawuleza okukhulu ekuqaleni wabaleka kwiWomensHealthMag.com.
amafutha okuthambisa ulusu olunamafutha nge spf
I-555 ithetha ingelosi
qhubeka ubona i-1111
Izihlangu ezifanelekileyo zamathambo ze-plantar fasciitis
njani ukugcina umyeni wam anelisekile ngokwesondo